SomaliTalk.com » 2009 » September » 03
Home » Archive Maalinta September 3rd, 2009
Soomaalidu isma dhiibayso!|Sh. M. Idris
بسم الله الرحمن الرحيم Mahad oo dhan Ilaah baa leh Nabad iyo Naxariisina Nebigeenna Korkiisa ha ahaato. Taariikhdu waa cibro iyo cashara waaweyn, waa kaydka waanada iyo waaya aragnimada. Dhacdooyinka maanta dhacayaa berri wexey noqdaan taariikh. Taariikhdu cidna ma duudsido, qof walbana wexey diiwaanka u gelisaa wuxuu galo iyo wuxuu gudo, booska uu istaago iyo kaalinta uu qaato Ummaddiisa...
Maxaa kala soctaa xaalada nololeed ee Qoxootiga soomaaliyeed ee wadanka Malta
Jaziirada maalta waxaa ku nool muhaajiriin soomaaliyeed oo fara badan oo gaarayay ilaa sanadii 2003.waxaa sanadkaan 2009 ka dhacayay dhacdooyin iyo isbedelo waaweyn oo quseeyay nolosha dadka muhaajiriinta kale duwan haba ugu badnaadaane kuwa madow. waxa aynu wareysi la yeelanay mudane caadil maxamed axmed oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska gudiga qaxootiga ee dalka malta kaasoo hoos yimaada wasaarada...
Halkudheg: malta, qaxooti
Sidee u shaqeeyaa Xafiiska Jimciyadda Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan
Intii aan ku sugnaa dalka Suudaan waxaana kullan la yeeshay madaxa Xafiiska Jimciyadda Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan Aadan Sheekh Xasan (Aadan Azhar), waxaana wax ka weydiiyey xaaladda Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan, waxa uuna ii sheegay in Jimciyaddaan ay ka diiwaangashan yihiin suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan, isagoo sheegay in ay la socdaan xaaladdooda isla markaana...
Haweeney qabta Cudurka AIDS-ka oo markii ugu hareysey Muqdisho ka qayb gashey siminaar
Haweeney qabta Cudurka AIDS-ka oo markii ugu hareysey Muqdisho ka qayb gashey siminaar ay qaban qaabisey Hayadda OSPAD Wareysi aan la yeeshey Haweeneydaas Haweeney qabtey Cudurka AIDS-ka ayaa markii ugu horeysey Muqdisho ka soo qaybgashey siminaar ay soo qabanqaabisey Hayadda OSPAD oo inta badan isku howsha siminaarada looga hadlo Khatarta Cudurka AIDS-ka waxaana qaybgalayaasha ku noqotey mid la yaab...